Muxuu Unai Emery Ka Yiri Guul Daradii Real, Hadii Laga Fiicnaa, Halkii Laga Haystay & Dareenkiisa %
Muxuu Unai Emery Ka Yiri Guul Daradii Real, Hadii Laga Fiicnaa, Halkii Laga Haystay & Dareenkiisa
Tababaraha PSG, ninka lagu magacaabo Unai Emery oo warbaahinta la hadlay kadib guul daradii 2-1 ahayd ee xalay kasoo gaartay kooxdiisa Real Madrid, lugta labaad Champions League ayaa qirtay in laga fiicnaa.
Los Blancos, ayaa wadar ahaan labadda lugood waxay kusoo baxday 5-2, taasoo ka dhigan in wareega Sideed dhamaadka ay iska xaadirisay, iyadoon awoodeeda gooldhalinta iyo Khibradeeda banaanka soo dhigtay.
Sikastaba, Emery oo ciyaarta ka dib uwaramay wariyaasha ayaa wuxuu ku nuux-nuux saday sida ay muhiim utahay inay iska iloobaan guul darada ay hada diirada saaraan tartamada kale ee Maxaliga ah
“Waa mid murugo ah, maxaa yeelay Champions League wuxuu ahaa hadafkeena, laakiin hada waxaan ubaahan nahay inaan is-dejino oo aan ka fikirno kulamada [Tartamada maxaliga ah sida] horyaalka iyo koobab kale,” ayuu yiri.
“Wxaan usoo baxnay wareega 16-ka inagoo awood leh laakin waqti xaadirkaan, waxaan khasaarno kala kulanlanay Real Madrid,” ayuu hadalkiisa kudii daray, macalinkii hore ee kooxda kubada cagta Seville
Mar uu ka hadlayay dareenkiisa kulanka ayuu yiri: “Wuxuu ahaa kulanka [In la badiyo ama lagaa badiyo] 50%, ma aanan qaadan wax faa’ido ah, si aan natiijo fiiican uhelno, sheekaduna waa ay isbedashay.
Mar uu ka hadlayay hadii Real ay iyaga ka fiicneed ayuu yiri: “Ma aanan sameyn karin [inay badiyaan] Real Madrid, waa ay fiicneed,” ayuu si daacadnimo ah uqirtay Unai Emrey, isagoona lasii hadlayay Suxufiyiinta.
“Waxaan isku deynay inaan shaqadeena qabsano, waxaana aniga ahaa mid doonayay in sidaas la sameeyo, wax walba waan isku deynay, laakiin sidii aan rabnay ma aysan noqon,” ayuu hadalkiisa kusoo xiray.
5-taCayaaryahan ee ugu fiicnaa Premier League Todobaadkaan